Fondant စာရွက် (အိမ်လုပ်) + ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ - အချက်အပြုတ်နည်းစနစ်
Fondant စာရွက် (LMF)
ဤနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောစာရွက်သည်ဝါသနာရှင်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မုန့်များအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပျော့ပျောင်းသောချောမွေ့ အတူအလုပ်လုပ်နှင့်ဒါအရသာ! ဤနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောစာရွက်သည်အလွန်ကောင်းသောကြောင့်သင်နောက်တဖန်စျေးကြီးသော fondant ကိုဝယ်စရာမလိုတော့ပါ။
ကျွန်ုပ်၏မြတ်နိုးဖွယ်စာရွက် (LMF fondant) သည်ကျွန်ုပ်ရှိနေစဉ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကထုတ်ဝေခဲ့ဖူးသောပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည် Artisan ကိတ်မုန့်ကုမ္ပဏီ နှင့်နေဆဲငါ့အအများဆုံးဝေမျှစာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Fondant အခြေခံအားဖြင့်မင်းရဲ့ရှစ်နှစ်အရွယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းလိုချင်တဲ့စားသုံးနိုင်တဲ့ပြဇာတ်ပါပဲ။ ပုံမှန် fondant စားသုံးနိုင်သော playdough ဖြစ်လျှင် marshmallow fondant စားသုံးနိုင်သောရွှံ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပိုပြီးစွယ်စုံအသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အရသာအများကြီးပါ (ငါသော်လည်းသင်တို့ကိုရွှံ့စားရန်အကြံပြုကြဘူး) ။
ထောင်ပေါင်းများစွာသောမုန့်ဖုတ်သမားများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဘလော့ဂါများကကျွန်ုပ်၏နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောစာရွက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်လူကြိုက်များလာပြီး၎င်းကိုအကြီးမားဆုံးပရိသတ်များက LMF (liz marek fondant) ဟုပင်အမည်ပေးခဲ့သည်။ ငါ fondant အောင် 'အချိန်အလွန်အကျွံ' သို့မဟုတ် 'ဟုအဆိုပါရောနှောအပေါ်ခက်ခဲလွန်း' ခဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပြောကြားခဲ့သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြုလုပ်ခြင်းသည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးသော fondant ကိုရရှိရန်စီးပွားရေး၊ အရသာနှင့်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုယနေ့ခေတ်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
Marshmallow Fondant နှင့်ပုံမှန် Fondant
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာကိတ်မုန့်အလှဆင်တာကိုကျွန်တော်ဝါသနာအစပြုခဲ့တုန်းကဝီလ်တန်ဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာ။ ငါပင် fondant ၏အခြားအမှတ်တံဆိပ်တည်ရှိမသိခဲ့ပါ။ ငါကရန်အသုံးပြုခဲ့သည်အားလုံးကြောင့်ငါကသုံးစွဲဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်မသိခဲ့ပါ။ ငါကိတ်မုန့်ကိုဖုံးလွှမ်းရန် 2-3 ကြိုးစားပြီးယူယူဆတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အုပ်စုများမတိုင်မီကဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကိတ်မုန့်အများစုသည်ရိုးရိုးရုန်းကန်မှုမှမဖြစ်ခဲ့။
fondant လုပ်ဖို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စင်ကြယ်သောလိုအပ်ချက်ထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးမိနစ်အမိန့်ကိုယူပြီးနှင့်ငါ့စီမံကိန်းကိုငါ့ကိုဖြတ်သန်းရရန်လုံလောက်သောစိတ်အားထက်သန်ခြင်းမရှိဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုရုတ်တရက်တွေ့ရှိခဲ့! ထိတ်လန့်စရာ mode ကို Cue! ငါမြတ်နိုးဖို့ဘယ်လိုပေါ်စာရွက်တက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်တန်လိုအပ်သည်။ ကောင်းပြီ။ ပါဝင်မှုနှစ်ခုသာလိုအပ်သည့်အခြား“ လွယ်ကူသောအိမ်လုပ်ဖိုဒါ” စာရွက်ကိုကျွန်ုပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ Marshmallows နှင့်အမှုန့်သကြား။ EPIC ပျက်ကွက်။ အက်ကွဲတာ၊ ကွဲကြေကွဲကွဲထွက်သွားတာလား။ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာသေချာမသိဘူး။ အပူတပြင်းအတွက်, ငါပျက်ကွက် fondant ကျန်ရှိသောဝီလ်တန် fondant ၏ 1/2 ပေါင်နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ ငါကရောထွေးထုတ်လှိမ့်ခြင်းနှင့်ကိတ်မုန့်ဖုံးလွှမ်းဘယ်လောက်အလွယ်တကူမှာအံ့သြခဲ့! အဘယ်သူမျှမမျက်ရည်, အိတ်ကပ်အမှတ်အသားများမရှိပူဖောင်း! ထိုအကြှနျုပျ၏ကျော်ကြား fondant စာရွက်မွေးဖွားပုံကိုပါပဲ။
ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရဖို့အတွက်ဒီ fondant ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်မှာထားပါ အဖြူကိတ်မုန့်စာရွက် နှစ်ခုအတူတူအလုပ်လုပ်ပုံကိုအရသာကြည့်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်သင် Fondant ရန် Fondant ထည့်သွင်းနေကြသနည်း
ငါမေးခွန်းအများကြီးရ။ ငါရပြီ။ မြတ်နိုးဖွယ်ကောင်းသောစာရွက်ထဲ၌ fondant ကိုထည့်သွင်းရန်မှာအနည်းငယ်နောက်ပြန်ပုံရသည်။
ဒါဟာကြိုတင်လုပ် fondant ဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိဘဲ marshmallow fondant လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်အဖြစ် stretchy လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါဟာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ငါကြိုတင်လုပ်မပါဘဲ marshmallow fondant လုပ်ပေမယ့်ကိုယ့်အဖြစ်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ပါဘူးသင်လက်ျာဘက်ထွက်အဲဒီမှာ BEST အိမ်လုပ် fondant အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်ကဒီမှာလူတွေအများကြီးရဲ့သိ?
အတွက်ထည့်သွင်းများအတွက်အကြောင်းပြချက် pre- လုပ် fondant အိမ်လုပ် fondant ၏လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်သင်အခြေခံအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောစူပါ yummy fondant ၏ပိုကြီးသောအသုတ်သို့ကောင်းသောသို့မဟုတ်မြည်းစမ်းစေခြင်းငှါမပေးကြောင်း fondant ၏စျေးပေါအသုတ်အောင်နေပါတယ်။
၀ ယ်ယူခဲ့သည့် ၀ ယ်သူသည်စတိုးဆိုင်ကို ၀ ယ်သူအားအရာများစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်သကြား၊ အရသာနှင့်သွားဖုံးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပေါင်းစပ်မှုအတိအကျပေါ် မူတည်၍ သင်၏ fondant ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်နူးညံ့။ စေးကပ်မှုမှသည်ဝါးခြင်းသို့မဟုတ်ခက်ခဲသည့်အထိအထိနိုင်သည်။ ငါမကြာခဏသူတို့ couverture, အရည်အသွေးကိစ္စရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးပေါကုန်စုံစတိုးဆိုင်ချောကလက်ကိုနှစ်သက်ကြောင်း fondant ၏အရသာကိုကြိုက်နှစ်သက်မဟုတ်သူကပြောပါတယ်သူမည်သူမဆိုပြောပြပါ။ အားလုံး fondant အတူတူလုပ်ဖြစ်ပါတယ်!
Marshmallow fondant ကြောင်းအများအပြားပါဝင်ပစ္စည်းများမရှိပါ။ Marshmallows အဓိကဖွဲ့စည်းပုံပေး။ Marshmallows အများစုတွင်သကြားနှင့် gelatin ပါရှိသည်။ အနည်းငယ်တိုသောဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက်သည် fondant ကိုခြောက်သွေ့စေရန်ကူညီပေးသည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာ LMF သည်သင်အမှန်တကယ်စျေးပေါသော marshmallows များကိုအသုံးပြုသောအချိန်တွင်စျေးနှုန်းကိုထပ်မံကျဆင်းစေသောကြောင့်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Fondant ဟာကျွန်တော့်ဖောက်သည်တွေဟာသူတို့မုန်းတုန်းကသူတို့မုန်းတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာတွေထဲကတစ်ခုပါ မင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်အရသာ ။ ငါပြုံးပြီးခေါင်းညိတ်ပြီး“ ok” လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါ့အိမ်လုပ် marshmallow fondant စာ (ပရိတ်သတ်တွေက LMF လို့ခေါ်တဲ့) ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ရင်ငါသူတို့ကိုချိတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သူတို့ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးမှု၏ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်သူတို့၏မျက်နှာပေါ်ရှိပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုနှစ်သက်မည်မဟုတ်ဟုထင်သောအရာ မှနေ၍ စင်ကြယ်သောထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက်သည်။ ဒါတကယ်ကောင်းတယ်!”
အကြှနျုပျ၏ marshmallow fondant နှစ်ပေါင်းများစွာငါ့လျှို့ဝှက်ချက်လက်နက်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ယခုကသင်၏ဥစ္စာဖြစ်နိုင်သည်။
Beginners များအတွက်လွယ်ကူသော Fondant စာရွက်
အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့် vs အပြာကတ္တီပါကိတ်မုန့်
ဒါကြောင့်သင် fondant နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ပေမယ့်သင်ကြောက်တယ်! ငါရပြီ! အစပြုသူများစွာသည် fondant နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်ကိုကြားရ။ ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းဘာသိလဲ အောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ပဲ။ သငျသညျကွဲအက်, ကိုက်ဖြတ်, ဆင်အသားအရေ, pockmarks, ပူဖောင်းသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့တဲ့ပင်လျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းရိုးရိုးမကောင်းတဲ့စတိုးဆိုင် - ဝယ် fondant ကိုအသုံးပြု။
သငျသညျတကယ်အကြောင်းအားလုံးလေ့လာသင်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ကိတ်မုန့်ကိုအလှဆင်၏အခြေခံ သငျသညျငါတို့ Sugar Geek ပြပွဲအပေါ်ငါတို့စီးရီးကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း, ငါတို့, သင်တို့ကိုချိတ်မထားဘူးဆိုရင် မင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်အခြေခံစီးရီး အလိုရှိ!
ဤစာရွက်သည်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ဖန်စီထားသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုယူပြီးသင်ပြုလုပ်ပြီးနောက် (နွေးနေဆဲ) ချက်ချင်းအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်။
သငျသညျ Marshmallows မပါဘဲ Fondant စေနိုင်မည်နည်း
ငါ၏အ LMF စာရွက်ကနေအစဉ်အဆက်အအအရှိဆုံးဆုံးသောအရာတစျခုဖြစ်ကောင်း DKF (Danettes Kosher Fondant) ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်း Danette က gelatin ကိုမစားနိုင်လို့ LMF လိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲစျေးပေါတဲ့ marshmallows အစား marshmallow fluff ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီး kosher ပါ။
ဤတွင်အိမ်လုပ် fondant နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အခြားအချက်များရှိပါသည်။ ငါတို့အခြေခံကိတ်မုန့်အလှဆင်ခြင်းစီးရီးများတွင်ကိတ်မုန့်အလှဆင်ခြင်း၏အခြေခံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ fondant ပါးလွှာလှိမ့်။ 1/8 your သင့်ရဲ့မြတ်နိုးသူအားမျက်ရည်မကျစေဖို့နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်ထိုချွန်ထက်သောအနားများကိုရနိုင်ပြီးသင်တစ်သုတ်တည်းကိုအများဆုံးရယူနိုင်သည်။
မင်းကိတ်မုန့်တွေကိုမဖုံးခင်အေး။ သေချာအောင်လုပ်ပါ အချစ် ဒါမှမဟုတ် ခွေးရူး အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်ကိတ်မုန့်ကိုမဖုံးခင်ကောင်းမွန်ပြီးအေးသည် (သို့သော်အေးခဲခြင်းမရှိပါ) ။
သင့်ရဲ့ fondant ကိုသင်လိုအပ်သည်ထက်ပိုကြီးထုတ်လိုက်ပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အမှားအယွင်းတစ်ခုက fondant ကိုသေးငယ်လွန်းစွာလှိမ့်ထွက်သွားစေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သင်သည်ကိတ်မုန့်၏အောက်ခြေပတ်လည်တွင် ruffles နှင့်မျက်ရည်များစွာရရှိသည်။ သင်ပိုကြီးတဲ့အပိုင်းအစတစ်ခုကိုလှိမ့်လိုက်ရင်သူကသူ့ဟာသူဖုံးအုပ်လိုက်တယ်။
မင်းရဲ့ fondant ကိုမသုံးခင်အေးအေးဆေးဆေးထားပါ။ သင်ရုံကလုပ်ခြင်းမရှိပါကအမြဲတမ်းသင်၏နွေးထွေးသောနွေးကိုနူးညံ့ပြီးတင်းကျပ်သည့်အထိကောင်းစွာပွားပါ။ Cold fondant မျက်ရည်ယိုကြိုက်တယ်။
သင့်တွင်ဖုံးလွှမ်းရန်အလွှာပေါင်းများစွာရှိပါက၊ အကြီးဆုံးကိုပထမ ဦး စွာဖုံးအုပ်။ သင်၏မြတ်နိုးသူမှအမြင့်ဆုံးရရှိရန်အငယ်ဆုံးသို့သွားပါ။ LMF အစုတစ်စုသည် ၁/၈″ အထူသို့လှိမ့်သွားလျှင် ၁၀ 10 -8″ -6″ ပတ်ပတ်လည်ကိုအနည်းငယ်ကျန်ကြွင်းစေမည်။
သင်သည်သင်၏အရသာအိမ်လုပ်ပြီးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောစာရွက်ကိုပြုလုပ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်လိုချင်ကောင်းလိုလိမ့်မည် သင့်ရဲ့ fondant စာရွက်အရောင် ။ ဒီမှာသော့ချက်ကမင်းကအစားအသောက်အရောင်တွေများလွန်းတာမသုံးတာသေချာအောင်လုပ်တာပါ။ သင်အလွန်အကျွံအသုံးပြုပါက၎င်းသည်သင်၏ fondant ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
သင်တစ် ဦး လိုလျှင် fondant ၏အရောင်အရောင် သင်၏အဖြူရောင်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့အရောင်အနည်းငယ်ထပ်ထည့်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်ကသာတောက်ပသောအရောင် (သို့) အမည်းရောင်အရောင်များကိုလိုချင်လျှင် အနက်ရောင် fondant ဒါမှမဟုတ် အနီရောင် fondant ထို့နောက်အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်ပြုလုပ်သည့်အခါအရောင်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
Marshmallow Fondant အောင်များအတွက်မီးဖိုချောင် Tools များ
Kitchenaid ရောနှော ငါအလှဆင်တာကိုစလုပ်တုန်းကကျွန်မမှာရိုးရှင်းတဲ့ဒုတိယမြောက် KitchenAid ရှိခဲ့တယ်။ ဒါကသင်တကယ်လိုအပ်သမျှပဲ! ဂန္ထဝင်အရွယ်အစားဖြင့်ပြုလုပ်သည့်အခါဤစာရွက်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အပြည့်အဝအရည်ကျိုသည်အထိ 30 စက္ကန့်ပေါကျကှဲအတွက် marshmallows ၏ 1 ပေါင်မိုက်ခရိုဝေ့
သင်၏ရေကိုထည့်ပြီးအရည်ပျော်သော marshmallows များကိုမတ်တပ်ရပ်သည့်ရောနှောထားသောပန်းကန်လုံးထဲသို့ထည့်ပြီးမုန့်စိမ်းချိတ်နှင့်တွဲပါ
သင့်ရဲ့ fondant ကိုချောမွေ့သည်အထိအနိမ့်အပေါ်ရောနှောပါစေ, ဒီ5မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်ဒီတော့နိုင်ပါတယ်
မင်းရဲ့စတိုးဆိုင်ကိုအပူပေးပြီး fondant ကိုစက္ကန့် ၃၀ လောက်ဝယ်ပြီး marshmallow fondant ထဲကိုထည့်ပါ
fondant အထိချိုးဖဲ့ခြင်းမရှိဘဲ taffy ကဲ့သို့ဆန့်နိုင်ပါတယ်အထိ
ဤစာရွက်ကိုပြုလုပ်ရန်သင်ဝယ်ယူလိုသော ၀ ယ်လိုသည့်စတိုးဆိုင်အနည်းငယ်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဝီလ်တန်ဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်သောအရာနှင့်စူပါစျေးပေါသော်လည်း၊ ကူပွန်ကိုအသုံးပြုပါကသင် ပိုမို၍ စျေးနှုန်းချိုသာစွာရနိုင်သည်။ ငါဟာ Jo-Anns မှဖြစ်စေ၊ Michael အွန်လိုင်းသို့မဟုတ် app တွင်ကူပွန်တစ်ခုအမြဲရှိသည်။ သင်သည်သေတ္တာကြီး (၅ ပေါင်) ၀ ယ်ပြီးနောက် ၄၀% လျော့ရန်ကူပွန်ကိုအသုံးပြုလိုသည်။ ကူပွန်များကိုအက်ပ်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရရန်သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ၅ ပေါင်သေတ္တာတစ်လုံးစီသည်လေးစားဖွယ်ကောင်းသောအသုတ်လေးမျိုးပြုလုပ်နိုင်ပြီးသေတ္တာငယ်တစ်လုံး ၀ ယ်ခြင်းထက်ကြီးမားသောသေတ္တာကို ၀ ယ်ရန်အလွန်ဈေးချိုသည်။
သင်တို့သည်လည်း Amazon အပေါ် fondant ဝယ်ယူရန်နှင့်တခါတရံတွင်ကူပွန်နှင့်ပင်လူတစ် ဦး ဝယ်ယူခြင်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာနှင့်သင် Amazon Prime နှင့်အတူအခမဲ့သင်္ဘောရရှိနိုင်ပါ။
နောက်တစ်ခုက marshmallows ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Winco မှသတ္တုတွင်းကိုဝယ်ပါသည်။ သို့သော်သင် Winco မရှိပါကစျေးပေါသောစတိုးအမှတ်တံဆိပ် marshmallows ကိုသာကြည့်ပါ။ Jet-puff ကကျွန်မအတွက်အရမ်းခက်ခဲပြီးခြောက်သွေ့တယ်။ သင်ဟာ ၁ ပေါင်အိတ်တစ်လုံးလိုလိမ့်မယ်။ ငါ၏အ Winco တစ်အိတ်မှာ .87 ကုန်ကျသည်။
ဤရွေ့ကားအံ့သြဖွယ်အရသာနှင့်ကိုက်ဖြတ်သို့မဟုတ်အခြောက်မရပါဘူးသော marshmallow fondant အောင်၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်ကိုမှတ်ချက်များတွင်ဆက်လက်ထားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ marshmallow နှစ်သက်ဖွယ်စာရွက်ကိုမည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုကြည့်ရန်စာရွက်ထဲမှဗီဒီယိုကိုကြည့်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
အကောင်းဆုံး vanilla ကိတ်မုန့်
လွယ်ကူသော buttercream နှင်းခဲစာရွက်
ဆင်အသားအရေကိုမဖြိုဖျက်၊ မဖြတ်နိုင်၊ ဝါသနာပါသူများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိတ်မုန့်အလှဆင်သူများ၏အကြိုက်ဆုံးစာရွက်ဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်ချိန် -၅ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၂၅ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၃၀ မိနစ် ကယ်လိုရီ1469kcal
▢၃၂ oz (907 ဆ) သကြားမှုန့် ဆန်ခါ (ရေခဲသကြား၊ အချိုဓာတ်ကိုလည်းခေါ်သည်)
▢၁၆ oz (454 ဆ) ကွမ်းခြံကုန်း WinCo, Hy-Top, Aldi နှင့် Campfire တံဆိပ်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
▢နှစ်ဆယ် oz (567 ဆ) ဝီလ်တန် fondant ဖဲ Ice fondant လည်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်
▢နှစ် tbsp (နှစ် tbsp) ပူနွေးသောရေ မှောင်မိုက်သောအရောင်များအတွက် 1 tbsp နွေးသောရေနှင့် 1 tbsp အစားအစာအရောင်ဂျယ်လ်ကိုအသုံးပြုပါ
▢၄ oz (၁၁၃ ဆ) ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက် ဒါ့အပြင်အဖြူဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီ, trex, copha ဟုလည်းခေါ်ကြသည်
မြင့်မားသော (သို့မဟုတ်မီးဖိုထိပ်) ပေါ်တွင်မိုက်ခရိုဝေ့တွင်စက္ကန့် ၄၀ ကြာ marshmallows ကိုအပူပေးပါ။ ဇွန်းနှင့်မွှေပါ။
marshmallows များကို microwave ထဲသို့နောက်ထပ်စက္ကန့် ၃၀ (သို့မဟုတ်မီးဖိုပေါ်၌) ထားပါ။ ဇွန်းနှင့်မွှေပါ။
မိုက်ကရိုဝေ့ (သို့မဟုတ်မီးဖိုထိပ်) တွင်စက္ကန့် ၃၀ ကြာ marshmallows (နောက်ဆုံးအကြိမ်) အပူပေးပါ။ Marshmallows ဤအချက်မှာ ooey-gooey ဖြစ်နှင့်ရောနှောပန်းကန်ထဲသို့ထည့်သွင်းခံရဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။ သူတို့ကိုရေခွက်၏နှစ်ဖက်မှလွှတ်ပေးရန် marshmallows ထိပ်တွင်သင်၏ရေကိုသွန်းလောင်းပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက်နှင့်အတူပန်းကန်လုံးထဲသို့သွန်းလောင်း
မုန့်စိမ်းချိတ်တွဲခြင်းနှင့်အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက် (Kitchenaid stand mixers တွင် ၁ ကိုချိန်ညှိခြင်း) တွင်ရပ်နားသည့်အရောအနှောကိုဖွင့်ပါ သင်၏ဆန်ခါအမှုန့်တစ်ဝက်၊ တိုင်းထွာသည့်ခွက်တစ်ဝက်တွင်ထည့်ပြီး ၂ မိနစ်ခန့်ရောမွှေပါ။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုတကယ်ကြမ်းတမ်းပါလိမ့်မယ်
သူကပန်းကန်လုံး၏ဘေးနှစ်ဖက် ကပ်၍ ချောမွေ့နေသည်အထိမွှေပေးပါ။ အမှုန့်သကြားတစ်ခွက်တွင်ထည့်ပါ။
သင်၏လက်ချောင်းများပေါ်တွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက်ကိုထည့်ပြီးချိတ်ကိုဆွဲခြင်းဖြင့်မုန့်စိမ်းချိတ်တွဲခြင်းမှ fondant ကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
Wilton ဖောင်ဒေးရှင်းကိုစက္ကန့် ၄၀ ကြာနွေးပြီးအမှုန့်သကြားနှင့် marshmallow ရောနှောထားသောအိုးကြီးထဲသို့ထည့်ပါ။
အမှုန့်သကြား, marshmallows နှင့် Wilton fondant သည်အထိဒူးထောက်အများစုပါဝင်သည်။ သင်၏ရာသီဥတုပေါ် မူတည်၍ အမှုန့်များသကြားဓာတ်အားလုံးကိုမသုံးစွဲနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်လုံးဝကောင်းမွန်ပါသည်။
fondant ဆွဲအားဆွဲဆန့်ချောမွေ့သည်အထိဆွဲယူပါ။ အကယ်၍ ကြမ်းတမ်းသောအစက်အပြောက်များရှိသေးသည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်ဆုတ်ဖြဲနေပါက၎င်းကိုအပူရှိန်ဖြစ်စေရန်စက္ကန့် ၃၀ မှ ၄၀ အထိမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင်ပြန်ထားပါ။
အခန်းအပူချိန်တွင် zip-lock အိတ်ထဲတွင်သိုလှောင်ထားပါ။ Fondant သည် zip-lock အိတ်ထဲလပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မည်။ ထပ်မံသုံးရန်၊ အသုံးမပြုမီတင်းကျပ်သည်အထိကောင်းစွာဆေးကြောပါ။ သင်အရောင်ကိုအလိုရှိသည်အတိုင်းထည့်နိုင်သည်၊ သို့သော်မှောင်မိုက်သောအရောင်များအတွက်သင်ရောနှောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်သင်ထည့်သင့်သည်သို့မဟုတ်သင်ကစေးကပ်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်သည်။
အစားအစာတစ်ခုလုံး berry သီးမုန့်ကိတ်မုန့်ရောထွေး